“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား” / ‘ဒို့ခတ်မှာ မညံ့ပါရစေနဲ့’ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » “ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား” / ‘ဒို့ခတ်မှာ မညံ့ပါရစေနဲ့’
“ဒို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား” / ‘ဒို့ခတ်မှာ မညံ့ပါရစေနဲ့’
Posted by panpan on Oct 25, 2011 in Complaint / Claim, Creative Writing, Education, Jobs & Careers | 41 comments
မညံ့ချင်ပါ ရင်ထဲမှာ ကျလိကျလိ
အန်တီပဒုမ္မာရဲ့ ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး တွေးမိသမျှ ရေးချလိုက်ပါရဲ့
မန်းရင် အရမ်းစာကရှည်နေလို့ တစ်ပိုစ့်ရေးလိုက်တာပါ
ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူငယ်ဆိုတော့ လူငယ်ကိုပဲ အခြေခံပါရစေ
ကျွန်မတော့ စင်ကာပူထွက်မယ်ဆိုပြီး မနေ့က ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်
အရင်က လုံးဝနိုင်ငံခြားထွက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ နေလာခဲ့တာ
စင်ကာပူသွားဖို့ အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာခဲ့ပေမယ့် ပေကပ်ပြီးနေလာခဲ့တာ
ကျွန်မအမြဲတွေးမိတာက ကျွန်မတို့တွေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံသူ
နိုင်ငံခြားက အလုပ်တွေကို လက်ခံပြီး မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုပ်နေရတာပါ
ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရင်းပြီး ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဟာ
ကျွန်မတို့လူမျိုးတွေ အချိန်ကုန်၊ လူပန်းသက်သာအောင် အသုံးပြုဖို့မဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရလိုက်တဲ့ လုပ်အားခက ပရောဂျက်အတွက်ရတဲ့ငွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပါမွှားပဲ
ကျွန်မတို့ စွမ်းအားတွေနဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ သူများတိုးတက်ဖို့လုပ်ပေးနေရတယ်
၂၀၁၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၄ရက်နေ့တုန်းက ၅သိန်းတန်ဂျီအက်အမ်ဖုန်းတွေ စပြီးချပေးတယ်
အဲဒီနေ့ ရုံးကခွင့်ယူပြီး ဖုန်းသွားလျှောက်တယ်
ဖောင်ထုတ်ဖို့တန်းစီရတယ်၊ နောက်တစ်ခါ ဘဏ်သွင့်ခွင့်အတွက်စာရွက်ရဖို့ စောင့်ရတိုးရတယ်
ပြီးတော့ ဘဏ်ကိုပြေး၊ ဘဏ်မှာထပ်တိုး ထပ်စောင့်
ဘဏ်မှာငွေသွင်းပြီးတော့ ကဒ်ထုတ်ပေးမယ့် ဆက်သွယ်ရေးရုံးကိုပြေး
ကဒ်ထုတ်ပေးမယ့် ဆက်သွယ်ရေးရုံးက စောစောက ဖောင်တင်တဲ့ရုံးမဟုတ်ပြန်ဘူး
ဖောင်တင်တာ ဗဟန်း၊ ဘဏ်က သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ကဒ်ထုတ်ပေးမယ့် ဆက်သွယ်ရေးရုံးက ဘုရင့်နောင်
ကျွန်မတန်းစီရင်းတွေးမိတာက အွန်လိုင်းကနေ ဖုန်းလျှောက်ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးရုံးမှာပဲ
ငွေသွင်းလို့ရအောင် Banking System ရှိဖို့
ကျွန်မတို့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ Applicationတွေ၊ Systemတွေ ဒီနိုင်ငံမှာဘာလို့ မသုံးရတာလဲ
နိုင်ငံကို ကျွန်မတို့ ဥာဏ်စွမ်းနဲ့ တည်ဆောက်ခွင့်ပေးပါ
ဆရာအော်ပီကျယ်ပြောတဲ့ သားအိမ်လိုနိုင်ငံ အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး
မွေးထုတ်ပေးပြီး စွန့်ပစ်လိုက်ရတာမျိုး အဖြစ်မခံသင့်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် ဒါကိုအသုံးပြုဖို့ လုံလောက်တဲ့ အခွင့်အရေးမရှိဘူး
အသုံးပြုနိုင်သူ နည်းပါးတယ်၊ နေရာနည်းတယ်
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မချစ်လို့လား၊ မဟုတ်ပါ၊ ချစ်တော့ ချစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
ခုဆို ရုံးကနေပဲ ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်သူတွေ တော်တော်များနေပြီ
ကျွန်မနဲ့ တစ်နှစ်တည်း အလုပ်ဝင်သူတွေ တ၀က်ကျော်လောက် စင်ကာပူရောက်ကုန်ပြီ
ဒီမှာလည်း လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
၁၀ယောက်ရှိရင် ၁၀ယောက်လုံးစာအတွက် မဖြစ်တာပဲရှိတယ်
ဒီတော့ ကျန်တဲ့လူတွေက ဘာလုပ်ကြမလဲ
ရတဲ့နေရာမှာ ရသလောက်လေးနဲ့ ဒီမှာလုပ်ကိုင်ကြမှာလား
ဒီတော့ အရင်းအနှီးရှာဖို့သဘောနဲ့ ပြည်ပသွားသူတွေရှိလာတယ်
နောက်ပိုင်းတော့ ဟိုမှာနေရတဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုအခြေအနေတွေက ဒီမှာလိုမဟုတ်တော့
ဒီကိုပြန်မလာချင်တော့ဘူး (ပြည်ပမှာ နေရာကောင်းကောင်းနဲ့ အလုပ်ရသူတွေပါ)
ဒီလိုနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ရှာလို့မလွယ်တဲ့ငွေအတွက် ဟိုနိုင်ငံကပေးနိုင်တော့ ဟိုနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့
တစ်ဦးချင်းစီမှာ သူတနောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေရှိလဲ၊ မှီခိုသူတွေ၊ ဘ၀တွေ
ကျွန်မကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေပြီး အလုပ်လုပ်မယ်တွေးထားတာ
အထက်တန်းလွှာတွေလို့ ငွေမသုံးနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တာ ကိုယ်သုံးချင်တာတွေလည်း ၀ယ်နိုင်သုံးနိုင်တယ်
ကျန်းမာရေးအရ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်း ဆေးကုဖို့ လုံလောက်တဲ့ငွေက အရံသင့်ရှိတယ်
ဒါပေမယ့် ဒီငွေတွေက ကျွန်မလုပ်အားငွေတွေမဟုတ်ဘူး၊ အဖေ့ငွေတွေ၊
ကျွန်မလုပ်အားခက ကျွန်မသုံးတာနဲ့ကုန်တယ်၊ တခါတလေ အဖေ့ဆီကတောင် ပြန်ယူသုံးတယ်
ပြီးရင် အဖေ့အတွက် တာဝန်ယူပေးရမယ်
သူ့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ နှစ်တော်တော်ကြာဦးမယ်
အမေလည်း ဆုံးသွားပါပြီ၊ ကျွန်မတို့ မိသားစု၃ယောကပဲကျန်တာပါ
ကျွန်မတွေးမိတာက ဖြစ်စေချင်တာက စိတ်ကူယဉ်မိတာက
“မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပြီး၊ ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားကို အလည်သွားနိုင်ရင် ကောင်းလေစွ”
“အဆင့်မြင့်ပညာတွေကို နိုင်ငံခြားမှာ ငွေအများကြီးအကုန်ခံသင်စရာမလို၊ မိသားစုနဲ့ခွဲစရာမလိုပဲ
ပြည်တွင်းမှာပဲ သင်ကြားနိုင်ရင် ကောင်းလေစွ”
“အဲဒီလိုပညာသင်ပြီး ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်တွေ ထိုက်သင့်တဲ့နေရာတွေရပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အဲဒီစွမ်းအားတွေ
မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုကို တစ်ကယ်တတ်ကျွမ်းခဲ့ရင်
ပန်ပန် ပြောသလို ဘဲ ၊ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ လို့ မြင်ပါတယ်
ဒီမှာဆို ဘယ်လောက်ပညာတတ်တတ် ၊ လခ ၃ သိန်းဆိုတာ အမြင့်ဆုံးပါဘဲ
ထို၃သိန်း ကို သွားလာစရိတ်၊စားစရိတ်နုတ်သော် ရှေ့ ရေး မည်မျှ ကျန်မည်နည်း ။
ဒါတောင် မကြာခင် ၊ ဝင်ငွေခွန် လာတော့မယ် လို့ သိထားရတယ် ။
ခုတော့ ၂%ဖြစ်သွားပြီး ၂%လို့ အမိန့်စာထုတ်ပြီး ၆လအထိပဲ ၂%အခွန်ပေးရမှာ
ဟောဗျာ ၊ ပန်ပန် တို့ က အစကတဲ က ဆောင်ခဲ့ရတာလား
မသိခဲ့ဘူးဗျာ ။ အခုမှ သိရတယ် ။ တစ်ကယ်ပါဘဲ ။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးလဲ ဝန်ထမ်းပါဘဲ ။
သူတို့ ကြ မဆောင်ရဘူးဗျ ။ အေးဆေးဘဲ ။ ဟဲဟဲ
နိုင်ငံခြားသားပိုင်ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ရင် မြန်မာအစိုးရကို
အခွန် ၁၀% ဆောင်ရပါတယ်ရှင့်။
တစ်ချို့ကျတော့ လုပ်ငန်း၇ှင်က စိုက်ဆောင်ပေးတတ်သလို
တစ်ချို့ကျတော့ ကိုယ့်လစာထဲကပဲ ဆောင်ခိုင်းတတ်ကျတယ်
ကျနော်ကတော့ တတ်လို့ လုပ်စားတာမဟုတ်ဝူး ငတ်လို့ လုပ်စားတာ …
လိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့လည်း သဘောပါဗျာ ..
ကျနော်လည်း လာခဲ့ပါ့မယ် …
အလုပ် လုပ်ဖို့တော့ ဟုတ်ဝူး …ဒါ့ပုံရိုက်ဖို့ အဲ့က ဘော်ဘော်တွေ ကိုတွေ့ဖို့ …
အသက်ကြီးလာရင်တော့ ဘာဖြစ်မလဲ မသိဝူးဗျ ..
လောလောဆယ်တော့ အူလည်ကြောင်ကြား ဖြစ်နေတယ်…
ခုမှာ လိမ့်ဖို့စဉ်းစားပြီး လိမ့်ဖို့လုပ်မလို့
တိုင်းပြည် အတွက်ပေးဆပ်လိုစိတ် တကယ်ရှိတယ်
အဲဒီ စိတ်ဟာ နောင်မှာ ပြောင်းလဲမသွားဘူး ဆိုတာသေချာရင် ။
နိုင်ငံခြားကို ထွက်ဖြစ်အောင် ထွက်ပါ ။
( Repeat ) နိုင်ငံခြားကို ထွက်ဖြစ်အောင် ထွက်ပါ ။
နွားခြေရာခွက်ထက် အများကြီးကျယ်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့
ပိုမို ကြီးကျယ် နက်ရှိုင်း များပြားလှတဲ့
အားပါးတရ လက်ကုန် သင်ယူပြစ်လိုက်စမ်းပါ ။
ပြီးမှ အဲဒီအစွမ်းတွေ နှင့်
အမိပြည် ကြီးကို ပြန်ပြီး အလုပ်အကြွေး ပြုလိုက်စမ်းပါ ။
( Repeat ) နိုင်ငံခြားကို ထွက်ဖြစ်အောင် ထွက်ပါ ။”
ဦးဖောပြောသလိုပဲ။ အဲဒီ စိတ်ဟာ နောင်မှာ ပြောင်းလဲမသွားဘူး ဆိုတာသေချာဖို့ပဲလိုတယ်။
ဒီပြန်လာဖို့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ငြင်းပယ်ကြသူတွေလည်း ရှိတယ်။ တကယ်လည်း ပြန်လာရင် အံမ၀င်တော့လို့ဖြစ်တာလည်း ရှိတယ်။
အဲဒါကျတော့ ပြန်မလာတဲ့လူတွေပဲ အပြစ်တင်ရမလား၊ ပြန်လာတဲ့လူတွေအတွက်
အမိပြည် ကြီးကို ပြန်ပြီး အလုပ်အကြွေး ပြုလိုက်စမ်းပါ”
ကျွန်မကတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတွေ မလုပ်နိုင်ပါဘူး
မလုပ်နိုင်လို့ လုံးဝမလုပ်ရင်လည်း ပိုဆိုးမှာပါ
ပြီးတော့ ဒီမှာ ကိုယ်နိုင်သလောက် စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ အရင်းအနှီးလိုလို့
တချို့ကပြောတာ ဟိုမှာ နှစ်နဲ့ချီနေပြီး ဒီပြန်လာပြီး စီးပွားရေးလုပ်ရင် ဘယ်လိုက်နိုင်တော့မလဲ
စီးပွားရေးအကွက်တွေ ပြောင်းကုန်တာ ဘယ်လိုက်လို့ရတော့မလဲတဲ့။ အဲဒါကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံထက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကပြန်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုအကြောင်းမှာ လိုက်မမီဘူးဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး
သမီး pan pan
အဘ အမြင်ပြောကြည်မယ်နော် ။
” တချို့ကပြောတာ ဟိုမှာ နှစ်နဲ့ချီနေပြီး
အဲဒီ အမြင်လည်း မမှားဘူး ။
အခြေခိုင်ခိုင် ( အခြေခိုင်ခိုင် )
အနဲဆုံး ၁၅ နှစ် ၂၀ နှစ် လောက်
အတက်အကျ ဒါဏ် ခံပြီးမှ ငြိမ်သွားတာ ။
တရုတ်တွေက အဲလိုအနာခံပြီးမှ တက်ကြတော့
အစက ငွေရင်းနဲပြီး နှေးတယ်ထင်ရပေမယ့်
တဖြေးဖြေးနဲ့ပဲ ရောက်ပြီးရင် မြဲကြတယ် ။
မြန်မာတွေကတော့ နိုင်ငံခြားသွား ငွေရှာပြီး
ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ကြိုးစားကြပေမယ့်
ငွေကော အတွေ့အကြုံ အသိုင်းအဝိုင်းကော
မမှီတော့တာ အတွေ့ရများတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲဒါက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလေ ။
သမီး လဲ တရုတ်တွေလို
စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် ကစလုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး ။
သမီးက Computer နှင့်လည်း ပြီးတယ် ၊
” ကျွန်မလုပ်အားခက ကျွန်မသုံးတာနဲ့ကုန်တယ် ”
နောက်ပြီး သမီးမှာ အရင်းအနှီး မလုံလောက်သေးဘူး မဟုတ်လား
” အဖေအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ထိ သူအတွက်ပျိုးထောင်လို့မပြီးနိုင်သေးရင် ”
အဲဒီတော့ ထွက်ဖို့ chance ရှိရင် ထွက်သာထွက်ပါ ။
ကိုယ့် ပညာအရည်အချင်း ကတော့ လုံလောက် ပေစေနော် ။
စိတ်ထဲမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ထား ။
ငါ ဒီနေ့ကစပြီး ကျွန်ခံတော့မယ် လို့ ။
သူများခိုင်းဖတ် ဘဝ ကိုကျေကျေနပ်နပ်ကြီး နှစ် ၂၀ လုပ်မယ်လို့ ။
နို့မို့ရင် နေရခက်တယ် ။ လူသတ်မိလိမ့်မယ် ။
အဘတို့လည်း ဒီဘဝတွေ ဖြတ်လာတာ ။
သမီး အောင်မြင်ပါစေကွယ် ။
အဘပြောမှပဲ အားပဲတက်ရမလို၊ အားလျော့ပြီး ငိုချင်လာသလိုပါပဲ
အဘက အတွေ့အကြုံစုံတော့ မသိတာတွေ မေးရဦးမယ်
နှစ်၂၀လောက် သူများခိုင်းဖက်အဖြစ် ကျွန်ခံရမှာတော့ ဟုတ်ပါပြီအဘရယ်
ခုနကလို အဘပြောသလိုပဲ ပြန်လာရင် စီးပွားရေးလုပ်ဖို့က မလွယ်တော့ဘူးလေ
သူများကုမ္ပဏီမှာပဲ လုပ်ရဦးမလား၊ အသက်ကြီးတဲ့လူဆို လက်မခံတာများတယ်
စီးပွားရေးဆိုတာလည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေ့ါ
သူများကုမ္ပဏီမှာပဲ လုပ်ရဦးမလား ”
တဆင့်ခြင်းလုပ်ပါ သမီးရယ် ။
နောက် ၁၀နှစ် မှာသမီး
အများကြီး ပြောင်းဦးမှာ ။
အန်ကယ်ဖော နဲ့ ကျနော် သည်နေရာမှာ သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်ပြန်ပြီ …
ကျနော် ပြန်မှာဗျ …တနေ့နေ့ …လုံလောက်တဲ့ အသိပညာရပြီဆို ရင် ပြန်မယ်…
ဗမာပြည်မှာပဲ လုပ်စားမယ်ဗျ …
မှန်တာပြောရရင် ဗမာပြည်က ခုမှ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ တာစူတဲ့ ကာလပါ …
(ဟုတ်တယ်နော် ပြောင်ပြောင် ….မငြိုငြင်ချင်ဘူးနော် …)
ကျနော်တို့ တကယ်သာ အရည်အချင်းရှိ ရင် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်
နေရာကောင်းတွေ အများကြီး ရလာစရာရှိပါတယ် …
နိုင်ငံတကာ ကိုမှီဖို့ အသာထားလိုက်ဦး ..နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်လို့
သုံးလို့ရတဲ့ အခြေခံinfra-structure တွေ
(currency exchange, internet, media right, customer right,
insurance, tax, transportation, cell phone, etc..)
တကယ်ရှိလာကောင်းလာ မယ်ဆိုရင် businessတွေ အများကြီး ဖြစ်ထွန်းလာမှာပါ
အဲ့သည့်အချိန် ကြုံဖို့ မျှော်လင့်တယ်ဗျာ…
ပြည်တွင်းမှာပဲ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ လုပ်မယ်
နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး သူများခိုင်းတာလုပ် ပေးတာယူ ကျွေးတာစားနဲ့
ပိုက်ဆံ ခြစ်ခြုပ်စုရတဲ့ ဘွ ထက်တော့ အများကြီး သာလာစရာရှိတယ်ဗျာ
ခုတော့ အဲ့လို လုပ်နိုင်ဖို့ ပညာ အတွေ့အကြုံနဲ့ ငွေကြေးကို ကြိုးစား စုပေါ့ဗျာ..
မြန်မာပြည်မှာ အခွင့်အလမ်း ကောင်းတွေ စပေါ်နေပြီ ။
အခုချိန်ဟာ အသိအတတ်ပညာ ခိုင်ခိုင် နှင့်
အတွေ့အကြုံ လုံလုံလောက်လောက် ရှိပြီးသား
လူတွေအတွက် အခွင့်ကောင်း လို့ထင်တယ် ။
Dawei & Kyauk Phyu Deep Sea Ports
နှစ်ခုတည်းကကို Millionaires တွေ မွေးထုတ်ပေးတော့မှာ
Yangon မှာ သူငယ်ချင်းတွေ စပြင်နေကြပြီ ။
ကျနော် လည်း ကျောက်ဖြူရေနက် ဆိပ်ကမ်း ကိစ္စ သိပ် စိတ်ဝင်စားပါသည်..
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ အများကြီး ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်ခင်ဗျား..
အခု infra စလုပ်နေတော့ အနိမ့်ဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးအခြေခံ ၀န်ထမ်းကနေ
အမြင့်ဆုံး ဗိသုကာ ပညာရှင် အထိ အလုပ်တွေရမယ် …
နောက်တဆင့် electricians တွေ networkသမားတွေ
software systems တွေinstallationတွေ အတွက်
ဒါပြီးရင်တော့ Operation ပိုင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းပေါင်းဆုံက
professionals တွေအတွက် ပေါ့ဗျာ..
အပေါ်၂ဆင့်က ပညာရှင်တွေလည်း ဆောက်ပြီး ဆင်ပြီး ပြီးပြီ ပြုတ်ပြီ
မမှတ်ကြပါနဲ့…. maintenance အတွက်နဲ့ သည်ဟာကြီးအပေါ်မှာ
တည်မှီပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆင့်ပွား စီးပွားရေး အဆောက်အအုံတွေမှာ
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ဘက်ကသာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ ပညာရည် ပြည့်ဝနေဖို့ လိုတာပါ…
အဲဒီလို ထွက်သွားကျရင်းနဲ့ ပညာရပ်အပေါ်တကယ်ကျွမ်းကျင် .စေတနာ၇ှိတဲ့..
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ပညာရှင်တွေကို လူရာသွင်းမှ ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ အိမ်မက်တွေ.
ဒါပေမဲ့လည်း ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာကိုး..မှန်ပါတယ်..လုပ်ပါ.
ကိုယ်အရင်ပြည့်ဝ နေမှ သူများကို..ရှယ်နိုင်မှာလေ..(ပညာ.ဓန နှစ်မျိုးလုံးပေါ့)
မပန်ပန်ရေ.. အားပေးတယ်.. စလုံးကို ဒိုးသာဒိုး..
ဒီမှာ နိုင်ငံခြားက အရင်ရှင်းတွေက လာပြီး ဦးနှောက်ဖောက်စား
နေတာ.. ဟိုမှာ အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအခေါ် ပညာတွေ ပြည့်စုံရင်
အဲ့ကျမှ ရွှေပြည်ကို ပြန်လာခဲ့…
လူငယ်တွေအားလုံးကိုလည်း နွားခြေရာခွက်ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေပြည်ကြီးက
ခဏထွက်ပြီး ပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အမြင်တွေကျယ်အောင် လုပ်ကြပါ..
တချိန် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အစစ်ရတဲ့အချိန် တက်ညီလက်ညီ
(မပန်ပန်ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပါတယ်.. ကျနော်တစ်ယောက်သောသူကလည်း
ပရိုဂရမ်မာဖြစ်နေလို့ပါ… ဟီးး :D)
ကိုရင့်နှယ့် မကြောက်မရွံ့ ပလိုဂလမ်မာ ကို ကြိုက်ထားတယ်ပေါ့
ခင်ဗျာ့ looping ပတ်ပီးရစ်မှာ
if, if else, if else
နဲ့ condition စစ်ပြီးမေးခွန်းထုတ်မှာ ..
ဟိုဟာ မရဘူး သည်ဟာခွင့်မပြုဘူး
ဘယ်ဟာ ဘာဖြစ်ညာဖြစ်နဲ့ validate check လုပ်မှာ ကြောက်ဝူးလား..
ဒါတောင် AND တွေ OR တွေနဲ့ combo attack တွေ ပါသေးဝူးနော်
ဟုတ်ပါ့ ကိုယ့်လူ အင်ဇာဂိ ရယ်..
ပရိုဂရမ်မာဆိုတော့… အမြဲတမ်း error check တာခံနေရတယ်..
ကိုရင်ကလည်း အကြီး (အသက်)ဆိုတော့ ၀င်းဒိုး xp SPI လို ဟောင်းနေပြီလေ..
၀င်းဒိုး ၇ လို ကိုယ့်အပေါ် သိပ်အားမရဘူးထင်ပါ့..
မိန်းမ အရက် ဆိုရင် Acess Denied တဲ့…
မကြိုက်တာတွေလုပ်ရင်… Log in ပိတ်မယ်တဲ့…
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ် Sever က ကောင်းနေလို့..
ဟိုကို လိမ့်ပြီး အခြေအနေကောင်းရင်..ဒီကိုပြန်လှိမ့်ဖို့ မမေ့နဲ့ နော်..
အနော်တို့ တော့ ကိုသိန်းစိန်ကြီး ဘာတွေ လှုပ်ရှားမလဲပဲ စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်.
ဘာပဲ ပြောပြော ဘိုးတော်သန်းရွှေထက်တော့ သာမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်..(မြစ်ဆုံကိစ္စ.ရပ်ထားလို့ .အထင်ကြီးမိတာ)
ဘိုးတော်ရွှေရွှေ ကတော့..ရသမျ..တိုင်းကျိုးပြည်မပြုပဲ အိတ်ထဲ လွှတ်ထည့်ပလိုက်တော့….ကျုပ်တို့ ..တွေ..
လူတွေသာ ဖွတ်ဘ၀က မတက်ပေမဲ့..ကုန်ဈေးနှုန်းကတော့….လှိမ့်တက်တာပဲ..ပြန်မဆင်းဘူး..
အူမတောင့်သွားပြီဆို…ဥာဏ်ရွှင်ပြီး….ကောင်းရာကောင်းကြောင်း..စဉ်းစား..ဆက်လုပ်လို့ ရမှာမို့ ပါ
လခ နှစ်ပဲတပြားနဲ့ ..လိုင်းကားခနဲ့ …၀ါးတီးခနဲ့ ..သောက်ကျွေးတွေချည်ပဲ လှိမ့်တင်နေတယ်..
ပြောရင်းပြောရင်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် စိတ်နာလာဘီ…အဆုံးစီရင်မိတော့မယ်
အဆုံးစီရင်မယ်ဆိုလို့ …တစ်မျိုးမထင်နဲ့ ….
ရွှေခတ်ကုန် လို့ စိန်ခေတ်ရောက်ပီပဲ မှတ်လိုက်ပါ ကိုပေါက်ဖော်
စိန်ခေတ် လွန်ရင်တော့ “စုနိုင်” တော့မယ် ပဲ မှတ်ပါသည်
နှလုံးထီဂဏန်း အတိတ်ပေးတဲ့ ဘိ်ုးတော်လုပ်ခဲ့ဘူးသလား မှန်မှန်ပြော..
ဘာ၂လုံးထီလဲ တိဝူး …တားက အလောင်းအစား ၀ါဒနာပါတာ ဟုတ်ဝူးရယ် ..
ဘိုးဒေါ်တို့ နတ်ဂဒေါ်တို့နဲ့လည်း တိဝူး …အလုပ်ချိန်နဲ့ အိပ်ချိန်ကလွဲရင်
(မဟုတ်တာတခုခုက အမြဲ လုပ်နေပီး အားတာနဲ့ အိပ်နေတာ …ခစ်ခစ်…)
ကိုဇာက ဒီမှာတုန်းက ဘိုးတော်လေ
အဲ့လို ဆိုရင်တော့ ဟုတ်မယ်ဗျ…
အားအားရှိ ဟိုလူမနေရ သည်လူမနေရ လုပ်လား လုပ်ရဲ့
ပေါက်ပန်း၄၀ တွေ ရေး လား ရေးရဲ့
ပီး ..ဟိုမှာလျောက် ပြ သည်မှာ လျောက်ပြောနဲ့
အဲ့ရာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာက မျက်စိနောက်ပြီး ၆မြင်ကပ်လို့
အချိန်နဲ့ဒီရေသည်လူကိုမစောင်, တဲ့ငယ်တုံးရွယ်တုံးဘဲ နိုင်ငံခြားကိုထွက်လို့ကောင်းတယ် ငါ့ညီမအောင်မြင်မှာပါ မပူနဲ့အားပေးတယ်
တချို့ပြောကြတယ် တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြပါ ချစ်ကြပါ နဲ့ တကယ်က လူတိုင်းက တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြပြီးသားပါ ။
ချစ်ပုံ ချစ်နည်းသာ ကွာကြတာ ၊ ပန်ပန်လဲ တော်တော် ချစ်တတ်တာပဲ
လူတိုင်းမှာ ဘ၀က ပေးထားချက်တွေ ရှိတာမို့ ပေးထားချက်ကနေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နေကြရတာမို့ ဘေးကနေ ဟိုလိုလုပ် ဒီလိုလုပ်လို့ အကြံမပေးတော့ပါဘူး
ဘယ်မှာပဲ နေနေ ဒီရွာထဲကတော့ ထွက်မပြေးနဲ့နော
(ရွှေခတ်ကုန် လို့ စိန်ခေတ်ရောက်ပြီပဲ မှတ်လိုက်ပါ
စိန်ခေတ် လွန်ရင်တော့ “စုနိုင်” တော့မယ် )
inz@ghi says: ရေ ခုမှကြားဘူးတယ်
ကောင်းလိုက်တဲ့တဘောင် ပါလား….
ပန်ပန်လေးက စ ကိုထွက်ဘို့စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတော့
တို့တစ်တွေ ညံ့ခဲ့တယ်ပဲ ပြောပါတော့ ပန်ပန်ရေ…..။ ၀န်ခံပါတယ်..။ တို့တစ်တွေညံ့ခဲ့တာပါ…။ အဲဒိတော့ ညီမလေးရေ……… မင်းတို့တွေ တို့ အသက်အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီလို ညံ့ရမှာလား မညံ့ပါရစေနဲ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ သူတွေရဲ့ ညည်းထွားသံ တွေ ကင်းလွတ်အောင် ကြိုးစားကြပေါ့ကွာ…….. နော့…။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့လည်းလိုသေးသတဲ့ (အမေစုပြောတာ)
အရမ်းတော်တဲ့လူတွေတော့ ရှိပါရဲ့၊ ရှားကုန်ပြီ
ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ညံ့ကုန်မှာစိုးရတယ်
လူငယ်တွေ..မညံ့ပါဘူး။ ညံ့တဲ့လူငယ်တွေလည်း ပြုပြင် လမ်းပြပေးသူကောင်းကောင်းတွေ တွေ့ရင် ညံ့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး
ဒီပို့ စ်လေး က အသိ တွေ ရစေတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ..။
တစ်ကယ်တော့ ဘယ်ခေတ်က လူငယ်တွေ မှာမှ သိပ်မညံ့ခဲ့တယ်လို့ မထင်ပါဘူး…။ ရိုးရာ အစဉ်အလာတွေ ခြံခတ်ခံထားရပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ကြတာပါ…။ ကိုယ်အိမ်ထဲမှာတင် ကိုယ်အိမ်ကျယ်တွေ ဖြစ်နေကြတာ…။ အများစု လက်ခံထားတဲ့ ရိုးရာ အစဉ်အလာအတိုင်း ဆက်လက် မကျင့်သုံးပဲ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကိုယ်နဲ့ လိုက်လျောညီတေထွဖြစ်မဲ့ ၀တ်စုံကို ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီး ၀တ်ဆင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံး အဆင်ပြေ သွားပါလိမ့်မယ်…။
အပြင်ကတတ်လာတဲ့ပညာနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။
Yangon Directory ဦးမိုးကျော်
င်္ရိုးမဘဏ် FMI ဥက္ကဌ ဦးသိမ်းဝေ
carry on pan pan but be sure that you hasawell-plan
If I haveachance , I’d like to go abroad and get modern technical know-how
ထင်တာကိုတော့ပြောခြင်ပါတယ် ခက်တာက ခြောက်တန်းကျော်ကျော် ခုနစ်တန်းပြီးအောင်
မနေခဲ့ဘူးတဲ့သူက ပရိုဂရမ်မာ ဆိုတဲ့သူကို အာဘို့က အတော်တော့ဂွကျသား
ပရိုဂရမ်မာ ဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိတာက အဆိုးဆုံး ပရိုဂရမ်မာ ဆိုဒါ ဘာဂိုခေါ်သဒုံး
ဒါပေမယ့် အထင်တော့မသေးပါနဲ့ လက်ရှိမှာ အဆင့်မြင့်မြင့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ
အိမ်ခေါင်မိုး မိုးယိုရင် ခေါက်မိုးတက်ဖါတဲ့အလုပ်ကို လုပ်သူဆိုတော့ အဆင့်မြင့်တာပေါ့နော
ပြောပုံအရတော့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တယ် အဲ့သည်နိုင်ငံကိုဘဲသွားမယ်လို့ဆိုတယ်နော
ဘယ်လိုပုံနဲ့သွားမှာလဲ ဒီ ကုမ္ပဏီရဲ့ အလုပ်ကိုဘဲ မူရင်းနိုင်ငံမှာ ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ဘဲလုပ်မှာလား
ဒါကတော့အရေးကြီးတယ်ထင်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဝင်ငွေကိုတွက်ရတော့မှာမို့ပါ
မုရင်းကုမ္မဏီနဲ့ လုပ်ခွင့်ရခြင်းဟာ ဝင်ငွေရယ် အခွင့်ရေးရယ်တွက် သိပ်ကောင်းပါတယ်
ကြားဘူးမှာပါ မသွားခင်ကတော့ ဟိုလောက်ရမယ် ဒီလောက်ရမယ်
ဟိုဒါလုပ်ရမယ် ဒီဒါ လုပ်ရမယ် ဆိုပြီး နောက်ဆုံးကျ တစ်လွဲတွေဖြစ်ကုန်တာတွေ ( ရှိတတ် ) လို့ပါ
မြန်မာပြည်ကအလုပ်ရဲ့ မူရင်းနိုင်ငံ မူရင်းကုမ္ပဏီးမှာ သွားပြီးလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ဒါဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့အခွင့်ရေးတစ်ရပ်လို့ ဆိုခြင်ပါတယ်
ဒါတွေကတော့ အကြမ်းဖျင်းလက်တန်းပြောတာပါနော တတ်လို့တော့မဟုတ်ရပါဘူး
နှစ်ရက်လုပ်မှ တစ်နပ်စားရတဲ့ အလုပ်ကြမ်းသမားတစ်ယောက်ပါ
တိုင်းပြည်တွက်တွေဘာတွေဆိုတာကတော့ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့ဆို ဒီစကားက
ရီစရာဖြစ်သွားတယ်လို့တောင်ထင်မိပါတယ် ( အထင်ပါ )
မိသားစုရယ် အချိန်နှင့် အတတ်ပညာရယ် အနာဂတ်မှာ မိမိရပ်တည်နိုင်ဘို့ တွက်ချက်တာ လေးကို
( ယ္ခုလက်ရှိ မိမိရဲ့ဝင်ငွေ နှင့်အလုပ် အနာဂတ်တိုးတက်မှု့အခြေနေကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ )
ဆိုလိုတာက ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲ ကိုယ်ဘယ်လိုတိုးတက်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာကို သေသေခြာခြာတွက်ပါ
သိပ်အရေးကြီးတယ်နော် စိတ်ကူးယဉ်ရင်တော့ နာပြီသာမှတ် ( အရေးကြီးတယ် )
ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှု့မှာ အနာဂတ်ကိုယ်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲ ဒီအလုက်ကနေ တစ်နေ့ မိမိဘယ်လို ခွဲထွက်
ဥပမာ ဗယာကြော်ရောင်းတဲ့ကုလမအဖွားကြီးဆီမှာ အလုပ်လုပ်တယ် ပဲခြမ်းကိုဘယ်ကဝယ်တယ်
ဘယ်လို ဘာညာလုပ်တယ် သိပြီး ငါလဲဗယာကြော် ကြော်ရောင်းမယ် ( ရှဲ ရှဲ ရှဲ )
( ပြည်ပမှာနေပြီး ငွေရလာလို့ မြန်မာပြည်အကြောင်းမသိမှာ နောက်ကျနေမှာ )
တစ်ကယ်တော့ ဒီအကြောင်းမှာ ပြောစရာတွေအများးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးကြီးရှိပါတယ်
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ ယူဆပုံခြင်းမတူပါဘူး ပြောလို့သာပြောရတာ
ထမင်းနပ်မမှန်တဲ့ သတ္တဝါက ပရိုဂရမ်မာ ဆိုတာကို လက်ချာပေးရတာ မျက်နှာတော့ပူသကွယ်
မိမိကဒီကနေ ဒိုးတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မူရင်းအလုပ်ကိုဦးတည်မှာလား ဟိုရောက်မှ ရရာအလုပ်ကိုလုပ်မှာလား
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပိုက်ဆံရဘို့ အချိန်ကုန်ခံနေ အလုပ်လုပ်ပြီး အထုပ်ကလေးပိုက်ပြီး
ရွာပြန်ရောက်လို့ကတော့ ဘစ်ဇနစ်မှာ ချဉ်ပေါင်ရွက်သည်လောက် ကိုယ်အဖြစ်မရှိဖြစ်နေမယ်
( အဓိကကတော့ မိမိအနေနှင့် ငွေကြေးကိုစုစည်းနိုင်မှု့ကလေးကတော့
ထိပ်တန်းလိုအပ်ချက်ဘဲလို့ထင်တာဘဲ ( အထင် ) )
ဆိုတော့ကာ ကိုယ်ကအလုပ်လုပ်ပြီး ငွေကိုစုပြီ ရလာတဲ့ငွေလေးကို ဘယ်လို လှုပ်ရှားနေအောင်လုပ်မလဲ
( ရွှေဝယ်လိုက် မရှိရင်အပေါင်ဆိုင်မှာသွားထားလိုက် လခထုပ်ရင်ပြန်ရွေးလိုက် )
ပြောပြခြင်ပါတယ် အများကြီးပါ မပြောတတ်လို့
ဟိုရောက်လည်း လုပ်မယ့်အလုပ်ကတော့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာနဲ့ပါပဲ
စားဖို့နေဖို့ကတော့ ဟိုမှာအစ်မတစ်ယောက်ရှိလို့ နေစရာရှိတယ်(အလုပ်မရသေးရင်တောင်)
ဒါပေမယ့် အလုပ်ရဖို့သေချာမှ သွားမှာ (ဟိုက ဘော်ဘော်တွေကို အလုပ်ရှာခိုင်းမလို့)
ဒါမှမဟုတ် ဓါတ်ပုံတို့၊ ဒီဇိုင်းတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်လေးဖွင့်ချင်တာ၊
ဒါမှမဟုတ်လည်း လက်မှုပစ္စည်းဆိုင် (ဒါတွေကို စိတ်ကူးယဉ်တယ်ပြောပြောပေ့ါ)
အဲဒီအတွက် ငွေလေးစုပြီးလုပ်ရကောင်းနိုး စဉ်းစားတာပါဘပုရယ်
ဆိုတော့ လက်ရှိဝင်ငွေနဲ့ကတော့ လောလောဆယ်မိဘနားကပ်စားနေတာဆိုတော့ အိုကေနေတာပေ့ါ
ပန်ပန်လာမယ်ဆိုရင် ဦးကြောင် ကျိုနေမယ် ရေနွေး။ စားစရာလည်းရှိတယ် တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင် ချပ်ခ်ျကျောင်းမှာ၊ ကျန်တဲ့ရက်တွေအတွက် ယမ်ယမ်ခေါက်ဆွဲပြုတ် သေတ္တာလိုက်သယ်ခဲ့၊ ခရီးစရိတ်သက်သာအောင် ကုန်းကြောင်းလျောက်၊ ဟိုဟိုဒီဒီမသွားနဲ့ အိမ်ထဲမှာနေ။ မြေအောက်မီးရထား ခိုးစီးနည်း သင်ပေးမယ်။ နေစရာကိုတော့ မပူနဲ့၊ ဦးကြောင် လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ တာဝန်ယူတယ်။ အမျိုးသားရေးတာဝန် အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်။
ဒါဆိုပန်ပန်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကနေ တခြားတစ်ခုခုပြောင်းကြည့်ပါလား…
ကျမတို့ ကတော့တနှစ်ကိုလစာတ၀က်နီးပါးပြန်စုပေးပါတယ်ဆိုပါဆို့ …၄သိန်းရရင်..၂သိန်းကိုထုတ်ပေးတယ်..
ကျန်တဲ့ ၂သိန်းနဲ့ ၁၂လနဲ ၂၄ သိန်း အတိုးပါထဲ့ ပေးပြီး၂၅ သိန့်းပြန်ပေးကြပါတယ်
၅နှစ်ပြည့်တဲ့ ဝန်ထမ်းတိုင်း ဖုန်းတစ်လုံးအမည်ပေါက်…အလာကားပေးပါတယ်..။
လစဉ်..ဆန ၊်ဆီထောက်ပံ့တဲ့ ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်..ကျမတို့ ပေါဆန်းမွေးဆန်လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်..တအိတ်၃၅၀၀၀
ဒါမှမဟုတ်…..ကျမတို့ သူဌေးကိုညှိပြီးအကုန်တောင်းခဲ့ တာလေ
အန်တီ ဘယ် ခန်ပနီ မှာ လုပ်ထှာလဲဟင်
တား လည်း လာလုပ်ချင်ရို့ …
ဒါချို မရွှေအိမ်စည်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီလာခဲ့မယ်
အိုကေ၊ မကေ မသိသေးဘူး
မရွှေအိမ်စည်လို အိုကေမှာ ကိုဇေပဲဆိုရင်တော့ လုံးဝမသွားဒေါ့ဝူးးးးးးးးးးး
ရွှေအိမ်စည် ရေ။ ရွှေအိမ်စည့် ဆီ အလုပ်လျှေက်ချင် သူတွေတန်းစီ တိုးမပေါက် ဖြစ်ကုန်တော့မယ်။
ရွှေအိမ်စည်တို့ ကုမ္မဏီမှ လူများကို အလွန်ကံကောင်းသူများလို့ မှတ်ယူရမလို ၊ ရွှေအ်ိမ်စည့် သူဌေးကိုလည်း လွန်စွာ ချီးကျူး ရမှာပါ။
ရှာမှ ရှားမယ်လို့လဲထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ တကယ်သိချင်ပါတယ်။ စံပြ နမူနာ အတုယူရအောင်ပါ။